शिपिंग नीतिको प्रतिलिपि – Shekou Woman
सबै पोशाक / जम्पसुट / सेटहरू +-
शिपिंग नीतिको प्रतिलिपि
दुबै हाम्रो मानक र एक्सप्रेस शिपिंग विकल्पहरू बाहिर पठाइँदैछ र विश्वव्यापी रूपमा डेलिभर हुँदैछ! यद्यपि हामी ग्लोबल COVID-१ de पोष्ट ढिलाइले सबै मानक पोष्ट लाइनहरु लाई प्रभावित गर्न को लागी हाम्रो एक्सप्रेस विकल्प छनौट गर्न सिफारिस गर्दछौं।
शिपिंग सेवाहरू - विश्वव्यापी
सर्भिस स्थापना शिपिंग समय COST
मानक शिपिंग 9-15 व्यवसाय दिन सबै अर्डरका लागि नि: शुल्क १०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी otherwise 95 95 USD अमेरिकी डलर
एक्सप्रेस शिपिंग २--5 व्यवसाय दिनहरू Orders २०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी सबै अर्डरको लागि नि: शुल्क अन्यथा १$.95 USD अमेरिकी डलर
सबै अर्डरहरू प्याकेज गरीनेछ र २ व्यापार दिन भित्र पठाइनेछ। (यसले आदेशहरू समावेश गर्दैन जसमा एक प्रतिक्षा वस्तु वस्तु समावेश छ)। कृपया नोट गर्नुहोस्, हाम्रो अनुमानित शिपिंग समयले हाम्रो प्रक्रिया समय समावेश गर्दैन।
एक वेटलिस्ट वस्तु हाम्रो वेबसाइटमा सूचीबद्ध उत्पादन हो जुन तपाईं शिप गर्न तयार हुनु अघि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। वस्तुहरू हाम्रो गोदाममा उपलब्ध भए पछि, यो बाहिर पठाइनेछ!
महत्वपूर्ण रिमाइन्डर: यदि तपाईं अन्य वस्तुहरूका साथ प्रतीक्षासूची वस्तु खरीद गर्नुहुन्छ भने, हामी पूर्ण क्रममा बाहिर पठाउँदैनौं प्रतीक्षासूची वस्तु उपलब्ध नभएसम्म।
हामी तपाईंलाई यसको प्रतिक्षालय वस्तु खरीद गर्न सिफारिस गर्दछौं, यदि तपाईं पूरा अर्डरको लागि पर्खनु पर्दैन भने!